Wasaarada xanaanada xoolaha Puntland oo sheegtay in talaalayso xoolo gaaraya 5000 – SBC
Wasaarada xanaanada xoolaha Puntland oo sheegtay in talaalayso xoolo gaaraya 5000
Posted by Webmaster on Diseenbar 13, 2012 Comments
Wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Siciid Xasan Shire oo maanta shir jaraaid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Garoowe ayaa waxaa uu sheegay in dhulka miyiga ah ay u direen dhaqaatirta xoolaha si ay dadka xoolo dhaqatada ah ugu so daaweeyaan xoolaha.
Waxaa uu Tilmaamaay wasiirku dhakhaatiirta ay direen ay ka kooban yihiin toban kooxood isla markaana ay gaarayaan meelo ka tirsan gobolada Nugaal ,Bari ,Karkaar ,Mudug ,Sool ,Haylaan ayna daawayn doonan xoolo tiradoodu gaarayso 5000 kun neef daawayntaasi oo ay ka caawinayso hayada ICRC iyadoona daawayntaasi ay socon doonto mudo bil ah.
Dhanka kale wasiirku waxaa uu sheegay in wasaaradiisu sanadka soo socda ay awood u yeelan doonto in ay keensato sheybaaro awood u leh in lagu baaro dhamaan cudurada xoolaha ku dhaca uuna tababar u socdo shaqaalihii ka shaqayn lahaa.
Dhawaan ayey ahayd markii madaxwaynaha Puntland uu xariga ka jaray mashruuc lagu talaalayo xoola gaaraya hal milyan kuwaasi oo laga talaalay cuduro kala duwan oo xoolaha soo wajaha.
kure said says:
Diseenbar 13, 2012 at 7:48 pm
magacaa ha jiro wasiirka xanaanada xoolaha puntland shaqo culus buu hayaa wana wasiirka ugu wax qabashada badan dawlada puntland